Ahoana no Hanompoana An’Andriamanitra sy Hanatonana Azy? | Manatòna
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Baoulé Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Géorgien Haoussa Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kambôdzianina Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niue Norvezianina Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tiorka Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Twi Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Manatòna An’Andriamanitra, dia Hanatona Anareo Izy”
1-3. a) Inona no fantatsika momba ny olombelona, avy amin’ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanany kely? b) Inona no ara-dalàna raha asetrin’ny olombelona ny fitiavana ary inona no fanontaniana lehibe apetratsika amin’ny tenantsika?
TIAN’NY ray aman-dreny ny mahita ny zanany kely mitsiky. Matetika izy ireo no mampanatona ny tarehiny amin’ny tarehin’ilay zaza, sady manambitamby sy mitsikitsiky. Andrasan’izy ireo erỳ izay ho setrin’izany. Indro tokoa fa hita teo amin’ny takolaka sy molotr’ilay zaza fa nanomboka nitsiky izy. Manambara fitiavana io tsiky mahafatifaty io, ka mampiseho fa nitsiry ny fitiavan’ilay zaza, ho setrin’ny fitiavan’ny ray aman-dreniny.
2 Hitantsika avy amin’ny tsikin’ny zazakely fa fitiavana, raha ny ara-dalàna, no asetrin’ny olona ny fitiavana. Toy izany no nanaovana antsika. (Salamo 22:9) Mihamatotra kokoa ny zavatra asetrintsika ny fitiavana, rehefa mihalehibe isika. Mety ho tsaroanao angamba ny fitiavana nasehon’ny ray aman-dreninao, na havanao, na namanao, taminao, tamin’ny fahazazanao. Nitsiry tao am-ponao koa ny fitiavana, ka nitombo sy niseho tamin’ny zavatra nataonao. Fitiavana koa no nasetrinao ny fitiavana. Toy izany koa ve ny fifandraisanao amin’i Jehovah Andriamanitra?
3 Hoy ny Baiboly: “Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha.” (1 Jaona 4:19) Nampahatsiahivina anao tamin’ny Fizarana 1 ka hatramin’ny Fizarana 3 fa asehon’i Jehovah amim-pitiavana mba hahasoa anao ny heriny, ny rariny ary ny fahendreny. Hitanao tamin’ny Fizarana 4 fa naneho fitiavana niavaka tamin’ny olona sy taminao koa Izy. Mipetraka ao an-tsainao anefa ity fanontaniana tena lehibe ity: ‘Inona no hasetriko ny fitiavan’i Jehovah?’
Inona no dikan’ny hoe tia an’Andriamanitra?
4. Nahoana no lazaina fa tsy mahafantatra tsara ny dikan’ny hoe tia an’Andriamanitra ny olona?
4 I Jehovah no niavian’ny fitiavana, ka fantany tsara fa manan-kery lehibe hampipoitra ny tsara indrindra ao amin’ny olona ny fitiavana. Natoky foana àry izy fa hisy olona hanao zavatra ho setrin’ny fitiavany, na dia nikomy sy nivadika aza ny ankamaroan’ny olona. Maro be tokoa no tsy nivadika taminy. Mampalahelo anefa fa tsy nanazava tsara ny dikan’ny hoe tia an’Andriamanitra ireo fivavahan’ity tontolo ratsy ity. Maro no milaza ho tia an’Andriamanitra, nefa toa mihevitra fa eo am-bava fotsiny izany fitiavana izany. Mety hanomboka amin’ny teny tokoa ny fitiavana an’Andriamanitra, tsy misy hafa amin’ny fitiavan’ny zazakely hita voalohany amin’ny tsikiny. Betsaka noho izany anefa no takina amin’ny olon-dehibe.
5. Inona no dikan’ny hoe tia an’Andriamanitra, araka ny Baiboly, ary nahoana no tokony ho tiantsika izany?
5 Lazain’i Jehovah ny dikan’ny hoe tia azy. Hoy ny Teniny: “Izao no fitiavana an’Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny.” Tokony haseho àry ny fitiavana an’Andriamanitra. Marina fa tsy tian’ny maro izany mankatò izany. Milaza ihany anefa io andininy io hoe: “Sady tsy mavesatra ny didiny.” (1 Jaona 5:3) Natao hahasoa, fa tsy hampahory antsika, ny lalàn’i Jehovah Andriamanitra. (Isaia 48:17, 18) Feno toro lalana manampy antsika hanatona an’Andriamanitra ao amin’ny Teniny. Ahoana izany? Handinika lafiny telo amin’ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra isika. Izany dia ny firesahantsika aminy sy ny fanompoantsika ary ny fanahafantsika azy.
Firesahana amin’i Jehovah
6-8. a) Ahoana no hihainoantsika an’i Jehovah? b) Ahoana no hahatonga ny Soratra Masina ho velona, rehefa mamaky azy io isika?
6 Manomboka toy izao ny Toko 1: “Eritrereto hoe miresaka mivantana amin’Andriamanitra ianao.” Hitantsika fa tsy nofinofy izany. Tena niresaka tamin’Andriamanitra i Mosesy. Ary isika? Tsy mandefa anjely hiresaka amin’ny olona intsony i Jehovah, nefa manana fomba hafakely ifampiresahana amintsika izy. Ahoana no ahafahantsika mihaino azy?
7 “Nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra” ny Soratra Masina, ka mihaino an’i Jehovah isika rehefa mamaky azy io. (2 Timoty 3:16) Nampirisihin’ny mpanao salamo mba hamaky ny Baiboly ‘andro aman’alina’ àry ny mpanompon’i Jehovah. (Salamo 1:1, 2) Mitaky ezaka be izany, nefa misy vokany tsara. Hitantsika tao amin’ny Toko 18 fa toy ny taratasy sarobidy avy tamin’ilay Raintsika any an-danitra ny Baiboly. Tsy tokony handreraka àry ny mamaky azy io. Tokony ho velona ny famakiantsika ny Soratra Masina. Ahoana no anaovantsika izany?
8 Alao sary an-tsaina ilay tantara vakinao. Hevero ho olona tena misy ireo olona resahiny. Eritrereto ny zavatra niainany sy ny antony nanaovany zavatra. Eritrereto lalina izay vakinao, ary manontania tena hoe: ‘Inona no ianarako avy amin’izany momba an’i Jehovah? Inona no toetrany hitako eto? Inona no toro lalana tian’i Jehovah hianarako, ary ahoana no hampiharako izany?’ Vakio, saintsaino, ary ampiharo ny Tenin’Andriamanitra, dia ho velona izy io rehefa manao izany ianao.—Salamo 77:12; Jakoba 1:23-25.
9. Iza moa ny ‘mpanompo mahatoky sy malina’, ary nahoana isika no tokony hihaino tsara azy io?
9 Miteny amintsika amin’ny alalan’ny ‘mpanompo mahatoky sy malina’ koa i Jehovah. Efa nolazain’i Jesosy fa hisy antokona voahosotra vitsivitsy hotendrena hanome “hanina amin’ny fotoana”, mandritra izao andro farany be zava-manahirana izao. (Matio 24:45-47) Mandray sakafo ara-panahy avy amin’io mpanompo io isika, rehefa mamaky ireo boky sy gazety izay natao hanampiana antsika hahazo ny tena fahalalana ny Baiboly. Mandray izany koa isika rehefa manatrika ireo fivoriana sy fivoriambe kristianina. Mpanompon’i Kristy izy ireo, ka hendry isika raha mampihatra ny tenin’i Jesosy hoe “tandremo ny fihainonareo.” (Lioka 8:18) Mihaino tsara isika satria ekentsika fa anisan’ny fomba ifandraisan’i Jehovah amintsika io mpanompo mahatoky io.
10-12. a) Nahoana no fanomezana hafakely avy amin’i Jehovah ny vavaka? b) Vavaka manao ahoana no mahafaly an’i Jehovah, ary nahoana isika no matoky fa sarobidy aminy ny vavaka ataontsika?
10 Ahoana anefa no ifandraisantsika amin’i Jehovah? Afaka miresaka aminy ve isika? Mampahatahotra, na dia ny mieritreritra izany aza. Mety ho azonao eritreretina ve hoe ho afaka hanatona ny mpitondra ambony indrindra eo amin’ny taninao ianao, mba hiresaka momba ny fiainanao aminy? Mety hampidi-doza, indraindray, na dia ny fanandramana hanao izany aza! Mety hovonoina ho faty ny olona nanatona an’ilay mpanjaka persanina, tamin’ny andron’i Mordekay sy Estera, raha tsy nasain’ny mpanjaka hanatona azy. (Estera 4:10, 11) Eritrereto hoe hanatona an’ilay Tompon’izao rehetra izao ianao, nefa “tahaka ny valala” aminy na dia ny olona mahery indrindra aza. (Isaia 40:22) Tokony hatahotra loatra ve anefa isika ka tsy hanatona azy? Tsia!
11 Nanome fomba malalaka sy tsotra i Jehovah mba hanatonana azy, dia ny vavaka izany. Afaka mivavaka aminy amim-pinoana, na dia ny ankizikely aza, ka hanao izany amin’ny anaran’i Jesosy. (Jaona 14:6; Hebreo 11:6) Ahafahantsika mamboraka ny eritreritra sy fihetseham-po lalina indrindra koa ny vavaka, anisan’izany ny fijaliana tsy haintsika hazavaina. (Romana 8:26) Tsy tsara ny manao teny namboamboarina rehefa mivavaka, na manao vavaka lava feno teny miverimberina sy tsy misy heviny. (Matio 6:7, 8) Tsy feran’i Jehovah kosa ny halavan’ny vavaka ataontsika, na ny fotoana iresahantsika aminy. Manasa antsika mihitsy ny Teniny hoe “mivavaha, ka aza mitsahatra.”—1 Tesaloniana 5:17.
12 Tadidio fa i Jehovah ihany no antsoina hoe “Mpihaino vavaka”, ary mangoraka izy rehefa mihaino. (Salamo 65:2) Voatery mihaino fotsiny ny vavak’ireo mpanompony mahatoky ve izy? Tsia, fa mahafinaritra azy kosa ny mihaino azy ireo. Ampitahain’ny Teniny amin’ny ditin-kazo manitra ny vavaka, ary rehefa dorana izy io dia misy fofona manitra miakatra. (Salamo 141:2; Apokalypsy 5:8; 8:4) Tsy mampahery ve ny mieritreritra fa miakatra toy izany ny vavaka avy amin’ny fo ataontsika, ka mahafaly an’ilay Tompo Fara Tampony? Raha te hanatona an’Andriamanitra àry ianao, dia mivavaha matetika amim-panetren-tena, isan’andro. Aborahy aminy izay ao am-ponao, fa aza afenina. (Salamo 62:8) Lazao an’ilay Rainao any an-danitra izay mampanahy anao, ny fifalianao, ny fisaoranao ary ny fideranao. Hihatsara ny fifandraisanao aminy, raha manao izany ianao.
Fanompoana an’i Jehovah
13, 14. Inona no dikan’ny hoe manompo an’i Jehovah, ary nahoana no mety raha manao izany isika?
13 Tsy mitovy amin’ny fihainoana sy firesahana amin’ny namana na havana ny firesahana amin’i Jehovah Andriamanitra. Anisan’ny fanompoantsika azy izany, ka anomezantsika azy ny haja sy voninahitra tena mendrika ho azy. Fiainantsika manontolo ny fanompoana azy. Izany no fomba anehoantsika amin’i Jehovah fa tia azy amin’ny fontsika manontolo isika, ary izany koa no mampiray ny mpanompony tsy mivadika rehetra any an-danitra sy eto an-tany. Ren’ny apostoly Jaona ny anjely iray nandidy toy izao, tao amin’ny fahitany: “Miankohofa [na manompoa an’Ilay] eo anoloan’Izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano.”—Apokalypsy 14:7.
14 Nahoana isika no tokony hanompo an’i Jehovah? Eritrereto ireo toetrany noresahintsika, toy ny fahamasinana, hery, fifehezan-tena, fanaovana ny rariny, herim-po, famindram-po, fahendrena, fanetren-tena, fitiavana, fangorahana, tsy fivadihana, ary fahatsarana. Hitantsika fa i Jehovah no tena maneho ny toetra sarobidy rehetra, sady filamatra ambony indrindra. Hitantsika eo am-pandinihana ny toetrany fa mbola lehibe sy mahate hidera lavitra noho izay iheverantsika azy izy. Tsy hita fetra ny voninahiny, ary tsy voafetra ny haavony oharina amintsika. (Isaia 55:9) Tena manan-jo ho Mpanjaka tokoa i Jehovah, sady mendrika hotompointsika. Ahoana anefa no tokony hanompoantsika azy?
15. Ahoana no anompoantsika an’i Jehovah “amin’ny fanahy sy ny fahamarinana”, ary inona no azontsika atao any amin’ireo fivoriana kristianina?
15 Hoy i Jesosy: “Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin’ny fanahy sy ny fahamarinana.” (Jaona 4:24) Midika izany fa finoana sy fitiavana no anompoantsika an’i Jehovah, eo ambany fitarihan’ny fanahiny, ary manompo azy isika araka ny fahamarinana, dia ny fahalalana marina ao amin’ny Tenin’Andriamanitra. Afaka manompo an’i Jehovah “amin’ny fanahy sy ny fahamarinana” isika, rehefa miara-mivory amin’ireo mpiara-mivavaka amintsika. (Hebreo 10:24, 25) Maneho ny fitiavantsika an’i Jehovah sy ny fivavahana madio isika, rehefa mihira fiderana Azy, miara-mivavaka, ary mihaino sy mandray anjara amin’ny fiaraha-midinika ny Teniny.
Fotoana mahafinaritra anompoana an’i Jehovah ireo fivoriana kristianina
16. Inona no iray amin’ireo zavatra lehibe indrindra andidiana ny Kristianina marina, ary nahoana isika no vonona hankatò izany?
16 Manompo an’i Jehovah koa isika rehefa miresaka amin’ny olona momba azy, sy midera azy ampahibemaso. (Hebreo 13:15) Iray amin’ireo zavatra lehibe indrindra andidiana ny Kristianina tokoa ny fitoriana ny vaovao tsaran’ny Fanjakan’i Jehovah. (Matio 24:14) Vonona hankatò izany isika satria tia an’i Jehovah. ‘Nanajamba ny sain’ny tsy mino’ i Satana Devoly, ilay “andriamanitr’izao tontolo izao”, ka namafy lainga be momba an’i Jehovah. Rehefa mieritreritra izany isika, tsy may ve isika hijoro ho Vavolombelon’ilay Andriamanitsika, sady hanaporofo fa diso izany endrikendrika izany? (2 Korintiana 4:4; Isaia 43:10-12) Rehefa mandinika ny toetra mahatalanjon’i Jehovah isika, tsy irintsika ao anatintsika ao ve ny hiresaka momba azy amin’ny olona? Tena tsy misy tombontsoa lehibe kokoa noho ny manampy ny olona hahafantatra sy ho tia an’ilay Raintsika any an-danitra.
17. Inona koa no anisan’ny fanompoantsika an’i Jehovah, ary nahoana isika no tsy tokony hivadika?
17 Misy zavatra hafa koa anisan’ny fanompoantsika an’i Jehovah. Mahakasika ny lafiny rehetra amin’ny fiainantsika izany. (Kolosiana 3:23) Miezaka hanao ny sitrapon’i Jehovah amin’ny zavatra rehetra isika, raha tena manaiky azy ho Tompo Fara Tampony. Voakasik’izany ny fiainam-pianakaviantsika, ny asa fivelomantsika, ny fifandraisantsika amin’ny olona, ary ny fialam-bolintsika. Te hanompo an’i Jehovah “amin’ny fo rehetra”, sady tsy hivadika, isika. (1 Tantara 28:9) Tsy mamela ny hisian’ny fo voazarazara, na hanaovana fahotana miafina izany, ka hoe jerena ivelany ho mpanompon’i Jehovah isika, nefa manao fahotana lehibe any ambadika. Tsy mihatsaravelatsihy toy izany isika raha tsy mivadika. Halantsika izany raha tia an’i Jehovah isika. Hanampy antsika koa ny tahotra an’Andriamanitra. Lazain’ny Baiboly fa ho sakaizan’i Jehovah hatrany isika raha manaja azy toy izany.—Ohabolana 3:32.
Manahafa an’i Jehovah
18, 19. Nahoana no azo inoana fa ho vitan’ny olona tsy lavorary ny hanahaka an’i Jehovah Andriamanitra?
18 Mampiseho ny fomba ‘hanahafantsika an’Andriamanitra, tahaka ny zanaka malala’, ny toko faran’ny fizarana tsirairay amin’ity boky ity. (Efesiana 5:1) Tsara ny mitadidy fa na tsy lavorary aza isika, dia tena afaka manahaka ny fomba lavorary ampiasan’i Jehovah ny heriny, hanaovany ny rariny, hanehoany fahendrena sy fitiavana. Ahoana no hahalalantsika fa azontsika atao ny manahaka ny Tsitoha? Tadidio ny dikan’ny anaran’i Jehovah. Mampianatra antsika izy io fa afaka ny ho tonga izay tiany izy mba hanatanterahany ny fikasany. Rariny raha matahotra azy noho izany isika, nefa tsy ho vitantsika mihitsy ve izany? Tsy izany mihitsy.
19 Noforonina araka ny endrik’Andriamanitra isika. (Genesisy 1:26) Tsy mitovy amin’ny zavaboary hafa eto an-tany àry ny olombelona. Tsy ny fahazarana, na ny fototarazo, na zavatra eo amin’ny manodidina, no mitarika antsika. Nomen’i Jehovah fanomezana sarobidy isika, dia ny safidy malalaka. Voafetra sy tsy lavorary isika, nefa afaka mifidy izay hataontsika. Tianao ve ny ho be fitiavana, hendry, manao ny rariny, ary mampiasa tsara ny hery? Ho vitanao izany, noho ny fanampian’ny fanahin’i Jehovah! Eritrereto ireo zavatra tsara ho vitanao.
20. Inona no zavatra tsara vitantsika rehefa manahaka an’i Jehovah isika?
20 Ho tian’ilay Rainao any an-danitra ianao, ka hampifaly ny fony. (Ohabolana 27:11) ‘Hahafa-po azy amin’ny zavatra rehetra’ mihitsy ianao amin’izay, satria fantany ny fetranao. (Kolosiana 1:9, 10, Kat.) Hahazo tombontsoa lehibe koa ianao, rehefa miezaka hanana toetra tsara toa an’ilay Ray malalanao. Ho mpitondra fahazavana eo amin’ity tontolo maizina sy tsy tia an’Andriamanitra ity ianao. (Matio 5:1, 2, 14) Ho anisan’ireo manaparitaka ny fahazavan’ny toetra be voninahitr’i Jehovah ianao. Voninahitra tokoa izany!
Enga anie ianao hanatona kokoa hatrany an’i Jehovah
21, 22. Inona ilay dia tsy mety tapitra miandry an’ireo tia an’i Jehovah?
21 Tsy zava-kendrena tsotra fotsiny ny fampirisihan’ny Jakoba 4:8. Dia lavitra izy io. Hitohy io dia io raha mbola tsy mivadika isika. Tsy hitsahatra hanatona kokoa an’i Jehovah isika. Misy zavatra maro tokoa azo ianarana momba azy. Tsy tokony hihevitra isika fa nianarantsika tato amin’ity boky ity ny zavatra rehetra momba an’i Jehovah. Vao nanomboka niresaka izay voalazan’ny Baiboly momba ilay Andriamanitsika isika, raha ny marina! Na ny Baiboly aza tsy milaza ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba an’i Jehovah. Nilaza ny apostoly Jaona fa “tsy omby ny boky voasoratra” izao tontolo izao, raha nosoratana daholo ny zavatra rehetra nataon’i Jesosy teto an-tany. (Jaona 21:25) Tsy mihoatra lavitra noho izany ve ny amin’ilay Ray?
22 Mbola hianatra zavatra momba an’i Jehovah foana isika, rehefa hiaina mandrakizay. (Mpitoriteny 3:11) Eritrereto àry ny zavatra miandry antsika. Hahafantatra zavatra betsaka kokoa momba an’i Jehovah noho izay fantatsika ankehitriny isika, rehefa ho niaina an-jato, na an’arivo, na an-tapitrisa, na an’arivo tapitrisa taona mihitsy. Mbola hahatsapa ihany anefa isika fa misy zava-mahatalanjona tsy hita isa mbola ho azo ianarana. Ho may hianatra bebe kokoa isika, satria hisy antony foana hahatsapantsika ireto tonon-kiran’ny mpanao salamo ireto: “Ny ho akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy.” (Salamo 73:28) Tena hahafinaritra ny fiainana mandrakizay sady hisy zavatra maro samihafa, ka ny fanatonana an’i Jehovah no tena hahasoa indrindra amin’izany.
23. Inona no ampirisihana mba hataonao?
23 Enga anie ianao izao ho tia an’i Jehovah amin’ny fo sy ny saina ary ny herinao rehetra, ho setrin’ny fitiavany anao. (Marka 12:29, 30) Aoka tsy hivadika sy ho lalim-paka ny fitiavanao. Aoka ny fanapahan-kevitra raisinao isan’andro, na kely na lehibe, mba hampiseho mandrakariva fa nifidy an’ilay lalana mitarika anao hifandray tsara kokoa amin’ilay Rainao any an-danitra ianao. Ambonin’ny zava-drehetra, dia enga anie ianao ka hanatona kokoa an’i Jehovah, ary izy koa hanatona anao, mandritra ny mandrakizay!
Salamo 25:1-22 Ahoana no anatonantsika kokoa an’i Jehovah, ary inona no atokisantsika, ho vokatr’izany?
Hosea 6:3 Ahoana no ampisehoan’io andininy io fa mitaky ezaka sady ahazoana fitahiana ny fahafantarana an’i Jehovah?
Matio 16:21-27 Iza no tsy maintsy tahafintsika ary inona no tokony ho toe-tsaintsika, raha te hanahaka an’i Jehovah isika?
Apokalypsy 21:3, 4 Te hanao inona ianao, rehefa mandinika ny fitahiana homen’i Jehovah?
Tombontsoa be ho antsika ny hoe anisan’ny fandaminan’Andriamanitra eo amin’izao rehetra izao. Ahoana no ampisehoantsika fa manohana ny asa ataon’izy io isika?
Tena tia anao i Jehovah. Ahoana no anaporofoanao fa te hanao ny sitrapony ianao isan’andro?